Belize mamela ny mpandeha vita vaksiny hiditra tsy misy fitsapana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Belize » Belize mamela ny mpandeha vita vaksiny hiditra tsy misy fitsapana
Raha tsy mahavita fanadinana PCR na antigen ratsy ny mpandeha, dia hatao amin'ny seranam-piaramanidina ny US $ 50
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny izao dia afaka miditra ao Belize nefa tsy mila mampiseho fanandramana ratsy COVID-19
Ireo mpitsangatsangana dia tsy maintsy mampiseho karatra firaketana vaksiny COVID-19 ho porofo fa efa nomena tapa-bolana farafahakeliny mialoha ny fahatongavany
Ireo mpitsangatsangana tsy vita vaksiny dia mbola takiana hanome fitsapana ratsy COVID-19 PCR natao tao anatin'ny 96 ora na fitsapana haingana Antigen natao nandritra ny 48 ora taorian'ny dia nankany Belize
Belize dia mamela ireo mpandeha vita vaksiny hiditra ao amin'ny distrika nefa tsy mila mampiseho fitsapana COVID-19 ratsy. Ny filaminam-pahasalamana vaovao, izay nanjary nahomby tamin'ny faran'ny volana febroary, dia nanambara fa ireo mpandeha izay miditra ao Belize amin'ny alàlan'ny seranam-piara-manidina ary manome porofon'ny fanefitra amin'ny COVID-19 dia tsy ilaina intsony ny mampiseho valin'ny fitsapana ratsy amin'ny fidirana. Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny dia afaka miditra ao amin'ny firenena nefa tsy mitaky fitakiana raha manolotra ny karatra firaketana vaksiny COVID-19 izy ireo ho porofo fa efa nomena tapa-bolana farafahakeliny mialoha ny fahatongavany ilay vaksiny.
Ireo mpitsangatsangana tsy vita vaksiny dia mbola takiana hatrany amin'ny fanadinana COVID-19 PCR ratsy natao tao anatin'ny 96 ora na fitsapana haingana Antigen natao nandritra ny 48 ora nivezivezy nankany Belize. Raha tsy mahavita fanadinana PCR na antigen ratsy ny mpandeha dia hatao amin'ny seranam-piaramanidina ny US $ 50. Ankoatr'izay, ny Minisiteran'ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny Belize dia nanitatra fanandramana mba hanamorana ny olona rehetra izay miala ao Belize handeha hamonjy any Etazonia sy ireo firenena hafa izay mitaky valim-panadinana ratsy amin'ny fidirana.
Ny fanapaha-kevitra hanamaivana ny fameperana ireo mpandeha nahazo vaksinin'ny COVID dia nanamora ny fihenan'ny tranga vaovao isan'andro manerana ny firenena. Belize dia tena nahomby tamin'ny ezaka nataony hifehezana ny fampitana ny COVID-19 tato anatin'ny herinandro vitsivitsy; Amin'izao fotoana izao dia misy tranga maherin'ny 100 miasa manerana ny firenena ary mihena hatrany ny isa.
Rehefa miparitaka manerana ny firenena ny fampielezana vaksinin'ny Belza ny COVID-19, dia anisan'ireo handray ny Vaksinim-boankazo AstraZeneca mandritra ny dingana voalohan'ny fampielezana ny mpiaro ny fizahan-tany. Ny vaksinin'ny sehatry ny fizahan-tany, miaraka amin'ny fampiharana tsy miova ny protokolom-pahasalamana sy fiarovana, ary ny fahazoana ny hajia World Travel & Tourism Council (WTTC) Safe Travels stamp dia hampita amin'izao tontolo izao fa Belize dia fizahan-tany azo antoka sy azo antoka tokoa. toeran-kaleha.